Transgbọ ala 450, Bus Bus for Tegucigalpa - Geofumadas
The Trans 450, idgbọ ala na-agba ọsọ ọsọ maka Tegucigalpa
June, 2012 innovations, Land Management
Nke a bụ ọrụ na-adọrọ mmasị bụ nke a na-ewulite ugbu a na Honduras, n'okpuru Rapid Transit Bus (BTR) modality. Ọ bụ ezie na ugbu a ọ dị na ọkwa nghọta ahụ n'ihu ndị na-ebugharị ebughi oke ụzọ obodo ahụ si gbasa, ọ dị anyị otu n'ime ihe dị mkpa na mmepe nke usoro nke usoro Territorial Plan na Urban Mobility nke Tegucigalpa.
Echiche a bụ n’oge na-adịbeghị anya na mba ndị dị na mpaghara Central America ọ bụ ezie na ọ malitere na 70 afọ na Brazil, ebe o ruru ọtụtụ mba na America dịka Colombia, Ecuador, Argentina, Peru, Chile, Mexico, Canada, United States na mba dị iche iche nke Europe na Africa Ọ bụ ihe a ma ama n'obodo ndị nwere nnukwu obodo dịka China na India.
Na ya onwe ya bụ bụghị nanị ihe ndị ụgbọ ala rapaara n'ọdụ, ma a ụkpụrụ na-agụnye gradual ewu nke trunked usoro na-arụ ọrụ na-enweghị na-emetụta ndị ọzọ okporo ụzọ, na feeders, busway, nche usoro, ndokwa ụzọ gasị, Geolocation na tinyere ma ọ dịkarịa ala ihe abụọ bụ isi: Bụrụ ngwa ngwa ngwa ngwa na ịnọgide na-arụ ọrụ dị mma. Ihe ịma aka abụọ a bụ isi nsogbu nke usoro ụgbọ njem ọdịnala na ebe a ga-enwe ọtụtụ ọrụ ka arụ ọrụ karịrị otu akụkụ obodo ahụ nwere mkparịta ụka na-adịghị mma n'oge na-adịbeghị anya n'ihe banyere nchekwa na njikwa.
Trans 450 nwere peeji nwere ozi nke kwesiri ịmasị anyị niile ndị metụtara okwu Territorial Plan, na-enyocha mmalite ya na mmetụta ya bara uru karịa. Anyị na-akwalite ya n'ihi na ihe ọma merenụ kwesịrị ịkwali anyị ịgbagha mmụọ ahụ na-enweghị atụ ikwenye na anyị enweghị ngwọta.
Ya mere, lee akụkụ abụọ dị mkpa nke Trans 450 page.
Nhazi na nhazi usoro ọmụmụ nke mbu.
Nke a na-agụnye akwụkwọ abụọ, nyocha na nkwupụta na nyocha nke usoro 12 dị ugbu a, na-egosipụta omume na ụbọchị ọrụ na otu na-eme ememme banyere maka ỤBỤ / Oge.
Na nke a, anyị maara ụdị nke ndị ọrụ na mpaghara nke mmetụta.
A na - ekpebi ọkwa profaịlụ site na olu nke ndị njem site na nkwụsị nke ụzọ ndị a nyochara
Maapụ dị n’elu na-egosi ọdachi ahụ ka ụzọ iri na abụọ ahụ siri arụ ọrụ. Ọgba aghara nke bọs kwụsịrị ọkara elekere na ọdụ ụgbọ oloko, na-akwụsị n'ebe a egosighi, mgbochi nke ụzọ abụọ maka igbochi nke na-esote ya ... ihe niile n'ihi na otu onye njem na-alụ ọgụ.
Maapụ ndị a na-egosi agụụ nke ndị ọrụ site na ọdụ ọdụ, n'akụkụ aka nri otu ụbọchị ọrụ, na isi awọ nke SUBE na acha anụnụ anụnụ LOW. Hụ otu esi etinye ụbọchị niile na-arụ ọrụ na njedebe ọrụ ebe ụbọchị nkwụsị anaghị arụ ọrụ bụ ebe azụmahịa dị n'okporo ụzọ.
Usoro BTR na-arụ ọrụ dị ka ụzọ ọ bụghị nke ndị njem weghaara, nke nwere ike inye onye ọrụ ahụ nkwa nke oge na oge. Enwere ọtụtụ ihe ịmụ site na akwụkwọ abụọ ahụ, ọ bụ ezie na ngosi bụ naanị nchịkọta nke ọmụmụ ihe zuru ezu, ọ na-egosi n'etiti ahịrị otu ụkpụrụ nke usoro ahụ si arụ ọrụ, otu ọnụego ya na usoro nhazi ya si arụ ọrụ nke mere na ọhaneze mana na-ekwusi ike ya.
Lee ọmụmụ ihe ahụ
A na-etinye nke a na Google Earth API ma na-egosi nhazi mmasị mmasị na ọkwa ndị a:
Nchịkwa Nke a bụ oke obodo, oke obodo yana mpaghara / agbata
NUMzọ ntụgharị nke 450. Na linear geometries nke ogwe na feeders
Ihe njirimara Nke a yiri anyị ụdị ndị na-adọrọ mmasị, ebe a na-ekwupụta mpaghara ahụ site na ogo nke nleghara anya ndị mmadụ na elele.
Agbanyeghi na ha di otutu kml nke nwere ihe ngosi AJAX, odi ka odi ihe bara uru igosi ndi bi na ntaneti ntinye ihe adighi nfe ịkọwa na mkpesa TV di nkenke ma gha enwe ihe omuma ndi ozo dika mmepe nke ọrụ.
Nke a bụ ihe nlereanya na-agbanye TransCAD, CAD / GIS software site na Caliper
Lee map map
Na mkpokọta, ọ dị ka ihe na-adọrọ mmasị bụ nke na-abụghịzi ihe ọhụrụ nye mba ndị ọzọ na karịa usoro anyị jiworo rụọ ọrụ dị mma nke weebụsaịtị, maka Honduras bụ usoro dị mkpa na ọhụụ nke isi obodo ya. Fọrọ nke mmụọ nsọ yiri nke isi boulevards ya na mgbaka ihu na asaa,
Previous Post«Previous Ihe Nlereanya nke Ọzụzụ GeoSpatial
Next Post Uru ọnụọgụ nke ozi mpagharaNext »